Hosoka sy fanaovana hosoka: olona efatra nahatrarana «baume relax» sandoka marobe | NewsMada
Tamina fivarotana efatra, tetsy amin’ny tsenan’Anosibe no nahatraran’ny polisy avy ao amin’ny Sampandraharaha miady amin’ny fanaovana hosoka menaka fanorana, « baume relax » sandoka, mahatratra 983 isa. Olona efatra no vcoasambotra tamin’izany.
Noraisim-potsiny ! Naharay fitoriana avy amina orinasa iray momba ny fiparitahana entana sandoka eny amin’ny tsenan’Anosibe ny polisy avy ao amin’ny « service central de la lutte contre les faux, fraudes et contrefaçons », ny 16 mey 2019 lasa teo. Nidina ifotony nanao avy hatrany fitsirihana ny polisy ka hita tokoa ny fisian’ireto entana sandoka ireto miparitaka eo an-tsenan’Anosibe. Fivarotana efatra no nahitana « baume relax » sandoka. Nohamafisin’ny polisy fa marika famantarana amin’ny taratasy napetaka ny hita amin’ireo fonosana « baume relax » miisa 983 ireo. Nanomboka teo ny fanadihadiana rehetra ka olona efatra indray voasambotry ny polisy izay mpivarotra entana sandoka avokoa. Nogiazana ireto entana sandoka ireto. Ao anatin’ny fanadihadiana ireto olona voarohirohy ireto ny polisy amin’izao fotoana izao.
Mampitaraina ny olona ny fisian’ny hosoka…
Eo am-pikarohana ny atidoha miketrika ity asa ratsy ity kosa ny polisy. Tsy vao izao ny nahitana olona manao hosoka toy izao satria hatramin’ny sakafo hamidy eny an-tsena aza, efa betsaka manao hosoka toy izao. Tsy vitan’izany fa eo koa ny entana efa lany daty aparitaka eto amintsika ary miroborobo rehefa fety, indrindra fa efa ho avy rahateo ny fetin’ny 26 jona. Hiparitaka indray ireo karazan-tsakafo avy any ivelany. Efa lany daty avokoa ny sasany amin’izy ireo fa mody asiana marika maneho ny daty farany azo ihinana izany rehefa tonga eto amintsika. Ankoatra izany, mampitaraina ny olona sy araka ny fijoroana vavolombelona nataon’ny olona iray tratra aza fa misy manindrona rano mangatsiaka koa ireny akoho fakana nofo ireny hampavesatra ny lanjany. Gaga ilay niharan’ny hosoka rehefa mahandro izany tonga any an-trano satria iray vilany ny rano avy amin’ilay akoho. Tena mahita tombony maro tokoa ve izany ireny mpivarotra manao hosoka ireny? Araka izany tokony hitohy isan’andro ny fidinana ifotony sy fanaraha-maso (indrindra rehefa andro fety) ny sakafo sy ny kojakoja ilain’ny fiainana andavanandro, toy ny vary, ny menaka… Misy rahateo ireo mahita tombontsoa amin’ny fanaovana hosoka toy izao.